Kheyraadka - StrengthenME
Caawinta Gobolka oo dhan Wac 207-221-8198
Laqabsashada hubin la’aanta nolosha faafa ma aha hawl fudud. Baro inaad aqoonsato calaamadaha walaaca la xiriira aafada, iyo marin u hel qalab bilaash ah oo kaa caawiya maaraynta culeyska fekerka. COVID waa walaac. XoojintaME way ku caawin kartaa.
Tilmaamaha caafimaadka iyo is-daryeelka
Cudurka faafa ee ‘COVID-19’ wuxuu si ba’an u beddelay nolosheena maalinlaha ah. Inbadan oo naga mid ah, isbedeladan waxaa kujira koox walwal badan oo walwalsan. Xaaladaha caadiga ah awgood waxaa laga yaabaa inaan haysanno qalab lagama maarmaan u ah maareynta walaacayaga, laakiin COVID waxay dareemi kartaa wax ka sii adag sidii looga gudbi lahaa. Haddii astaamaha hoos ku xusan ay sharraxayaan adiga ama qof aad daryeesho, adiga (ama iyadu) waxaa laga yaabaa inaad la kulanto walaac aad u sarreeya cudurrada faafa awgood.
Dhibaato hurdo la’aan ama xoog saarista.
Ka cabso oo ka walwasho caafimaadkaaga ama caafimaadka kuwa aad jeceshahay.
Isbedelada hurdada ama qaababka cunida.
Dareen murugo ama murugo.
Xanaaq badan ama samir la’aan.
Isticmaalka khamriga, tubaakada ama walxo kale.
Dhibaato dejinta waxyaabaha mudnaanta leh ama go’aan gaarista.
Xaaladaha caafimaadka maskaxda oo ka sii daraya.
Waxaa muhiim ah in la xasuusto falcelinta noocan oo kale ah inay caadi tahay. Waqtiga go’doominta, hubanti la’aanta, iyo halista jirada joogtada ah, waa macquul in la dareemo culeys, daal ama khibrad culeysyo kale.
Sawirka Vladislav Muslakov
Haddii adiga ama qof aad daryeesho uu soo foodsaaray culeys la xiriira COVID, talaabooyin fudud ayaa isbeddel sameyn kara:
Ku dadaal jirkaaga jimicsi joogto ah, hurdo, iyo cunto caafimaad leh.
Waqti u samee si aad u kala baxdo.
Ku celceli neefsashada qoto dheer, fidinta, ama fikirka.
Ka naso wararka iyo warbaahinta bulshada.
La xiriir dadka aad ku kalsoon tahay ee aad daryeesho, iyo bulshada- ama ururada diinta ku saleysan.
Waqti u samee waxqabadyada aad ka hesho.
Mudnaanta siiya caafimaadkaaga shucuureed.
Ka fogow aalkolada ama isticmaalka maandooriyaha.
Raadi wax intaa ka badan macluumaadka maskaxda ee bogga HealthChampion .
Sawirka waxaa qoray Greg Rosenke
Bannaanka u Bax
Waqti ku qaadashada banaanka waa hab fiican oo loo yareeyo buuqa. Waxay naga fogeyneysaa aaladaha dhijitaalka ah iyo quudinta wararka, waxayna na siisaa xawaare ka duwan kan shaqada, iskuulka ama nolosha guriga. Maine waxay leedahay fursado badan oo bannaanka ah oo wali la heli karo inkasta oo ay jiraan xaddidaadyo faafa. Joogto borotokoollada fogeynta bulshada, laakiin ku raaxeyso nasashada yareynta walaaca adoo maraya banaanka weyn.
U adeegso kheyraadkan sidii aad ku heli lahayd dariiqyada dhow.
Maine Bureau of Parks iyo Lands
Ka raadi macluumaad meelo badan oo banaanka loo baxo.
Raadi Jardiinooyin iyo Dhul
Kheyraadka maareynta culeyska
Abuuritaanka Boorso Is-daryeel ah
Qeybtan Bandhiga Maskaxda, cilmi-nafsiga Dr. Ali Mattu wuxuu ka hadlayaa hababka laqabsashada ee aad isticmaali kartid xilliyada walaaca.
Kheyraadka Dijital ah
Qalabka dijitaalka ah wuxuu ku siin karaa hagitaan iyo taageero nasashada, caafimaadka, maaraynta culeyska iyo waxyaabo kale oo badan.
Maskaxda iyo fahamka daaweynta habdhaqanka habdhaqanka.
App ah oo baro farsamooyinka neefsashada diaphragmatic ee xakameynta diiqadda.
Sanduuqa Rajada Virtual
Waxay bixisaa qalab fudud oo kaa caawinaya la qabsiga, nasashada, mashquulinta, iyo fikirka wanaagsan.
Waxay taageertaa aasaaska naftaada xilligan xaadirka ah.
Qalabka Fayo-qabka Dareenka
Tilmaame loogu talagalay dhismaha Qalabka Fayo-qabka Dareenka ee loogu talagalay adkeysiga jawiga weligiis isbeddelaya.
Waxaan halkan u joognaa inaan ku caawinno.
StrengthME waxay siisaa maareynta walbahaarka iyo ilaha adkeysiga lacag la’aan qofkasta oo jooga Maine oo la kulma falcelin walaac leh Cudurka Faafa ee COVID-19
Wac caawimaadda gobolka oo dhan 207-221-8198
Adeegyada Taageerada Degdega ah
Jaantuska hoose (ka Isbahaysiga Fursadaha ) wuxuu muujinayaa adeegyada taageerada degdegga ah ee aad heli karto markii heerka dhibaatadaadu ay korodho. Ka bilow xagga kore ee Ahraamta.